Izinhlelo zokusebenza ze-Elfsight: I-Ecommerce Eshumekeka Kalula, Ifomu, Okuqukethwe, kanye Namawijethi Omphakathi Wewebhusayithi Yakho | Martech Zone
Uma usebenza kokudumile ipulatifomu yokuphathwa kokuqukethwe, ngokuvamile uzothola ukukhetha okuhle kwamathuluzi namawijethi angangezwa kalula ukuthuthukisa isayithi lakho. Akuwona wonke amapulatifomu analezo zinketho, noma kunjalo, ngakho-ke ngokuvamile kudinga ukuthuthukiswa okuvela eceleni ukuze kuhlanganiswe izici noma amapulatifomu ofisa ukuwasebenzisa.
Isibonelo esisodwa, muva nje, bekuwukuthi besifuna ukuhlanganisa Ukubuyekezwa kwe-Google kwakamuva kusayithi yeklayenti ngaphandle kokwenza isisombululo noma ukubhalisela inkundla yokubuyekeza yonke. Sifuna nje ukushumeka iwijethi ebonisa ukubuyekezwa. Siyabonga, kunesixazululo salokho – amawijethi e-Elfsight asiza amasayithi angaphezu kwesigidi ukuthi akhulise ukuthengisa, abandakanye izivakashi, aqoqe imikhondo, nokuningi. Okuhle ngala mawijethi ukuthi akudingi ukubhala ikhodi… futhi ungaqala mahhala!
Elfsight Iwebhusayithi Amawijethi
I-Elfsight ineqoqo lezinhlelo zokusebenza ezinamandla ezingaphezu kuka-80 ezitholakala kubasebenzisi, okuhlanganisa amawijethi enkundla yezokuxhumana, amawijethi okubuyekeza, amawijethi e-ecommerce, amawijethi ezingxoxo, amawijethi efomu, amawijethi wevidiyo, amawijethi alalelwayo, amawijethi emephu, amawijethi egalari yezithombe, amawijethi esilayidi, amawijethi ashumekiwe e-PDF, imenyu. amawijethi, amawijethi ekhodi ye-QR, amawijethi wesimo sezulu, amawijethi okusesha… nokunye okuningi. Nawa amawijethi abo ambalwa adume kakhulu.
Iwijethi Yokuqinisekisa Ubudala - Uma udinga ukuqinisekisa ubudala bomsebenzisi futhi uvule ukufinyelela kusayithi lakho kuphela uma sebeneminyaka egcwele, zama ukwenza ngokwezifiso Iwijethi yokuqinisekiswa kwe-Elfsight Age. Khetha isifanekiso esifanelekile noma udale esakho kusukela ekuqaleni, setha umkhawulo weminyaka wohlobo lwakho lwemikhiqizo yezinsizakalo, khetha eyodwa yezindlela ezintathu zokuqinisekisa, engeza umbhalo womlayezo, bese uthatha isimo kubasebenzisi abancane.
Iwijethi Yengxoxo Eyodwa - Sebenzisa indlela elula nesebenzayo yokuxhumana nabasebenzisi bakho ku-Facebook Messenger, WhatsApp, Telegraph, noma i-Viber khona kanye kuwebhusayithi. Imizuzu embalwa yokwenza ngendlela oyifisayo futhi ufake iwijethi.
Iwijethi Yokubuyekeza Konke-kokukodwa - kunezikhathi lapho ungadingi inkundla yokuphatha isibuyekezo... ufuna nje ukushumeka iwijethi kusayithi lakho namazwana amaklayenti anamagama abasebenzisi, izithombe zephrofayela, kanye nokuqondisa kabusha ekhasini lakho kunoma iyiphi isayithi yokubuyekezwa kwebhizinisi amaklayenti aholayo. I-Elfsight inikeza izinsiza ezingu-20+ njenge-Google, Facebook, Amazon, eBay, Google Play Store, Booking.com, AliExpress, Airbnb, G2Crowd, Yelp, Etsy, OpenTable, nezinye eziningi. Kuyindlela ephumelelayo yokuqinisekisa ukwethembeka komkhiqizo wakho! Nasi isibonelo esihle esivela ku-a usonkontileka wokufulela sisebenza no:
Iwijethi Yesibali Sesikhathi Sokubala siyehla - Dala izibali-sikhathi ezikhiqiza ukuthengisa zewebhusayithi yakho ngazo I-Elfsight Countdown Timer. Shisisa umoya bese udala umuzwa wokushoda kwezinto zakho, ubonise ukuthi zithengiswa kanjani phambi kwamehlo amaklayenti. Khulisa ukuphuthuma kokuthengwa ngesikhathi esifika phansi ekupheleni kwenkathi yomnikelo okhethekile. Donsela ukunaka emicimbini yakho ezayo futhi ugcine izethameli zakho zilindele ngabomvu isiqalo ngesibali-sikhathi sokubala wehla.
Iwijethi Yekhalenda Lomcimbi - iwijethi ekuvumela ukuthi wabelane kalula ngemisebenzi yakho nomhlaba wonke. Iqukethe inqwaba yamathuba okubonisa imicimbi ezayo ngendlela emele kakhulu. Yenza kube ngokwakho ukuze uhlanganise idizayini nesitayela sewebhusayithi yakho. Yakha amanani amaningi emicimbi, engeza omaka, layisha izithombe zakho namavidiyo, futhi ugcine abasebenzisi bazi mayelana ne-ajenda yakho.
Facebook Feed Widget - ikuvumela ukuthi ubonise okuqukethwe okuvela ekhasini le-Facebook eliphethwe, okwazi ukufinyelela kulo njengomphathi. Uma usebenzisa ikhasi lebhizinisi ku-Facebook ungakwazi ukulihlanganisa kalula kuwebhusayithi yakho. Konke okuqukethwe okufaka ekhasini lakho lenkundla yezokuxhumana kuzobuyekezwa ngokuzenzakalelayo kuwebhusayithi yakho.
Iwijethi Yomakhi Wefomu - okuwukuphela kwento oyidingayo ukuze ube nazo zonke izinhlobo zamafomu okugcwalisa kusayithi lakho. Sinikeza ithuluzi lomhlaba wonke elinakho konke okukuvumela ukuthi udale inhlobo ebanzi yamafomu ukuze uqoqe idatha kumakhasimende akho. Othintwayo, Ifomu Lempendulo, Inhlolovo, Ifomu Lokubhuka - noma yiluphi uhlobo oludingayo, qiniseka ukuthi lisekelwa uhlelo lwethu lokusebenza futhi kuthatha imizuzwana ukulilungiselela.
Iwijethi Yezibuyekezo ze-Google - Khulisa uhla lwezithameli zokubuyekezwa kwebhizinisi lakho futhi ukushicilele kuwebhusayithi yakho. Iwijethi yethu izokusiza ukuthi ubonise ukubuyekeza kwakho okuningiliziwe ngegama lombhali, isithombe, nesixhumanisi esiya ku-akhawunti yakho ye-Google ukuze uthole ukubuyekezwa okusha okwengeziwe. Leyo yindlela esebenzayo yokufakazela ukwethembeka komkhiqizo wakho! Ungakwazi ukuhlunga izibuyekezo ukuze ubonise ezihamba phambili kuphela, ushintshe izilungiselelo zombhalo, izilinganiso zokubonisa, nokuningi. Iwebhusayithi yakho izobuyekeza ngokuzenzakalela ngezibuyekezo ezintsha njengoba zishicilelwa. Yakha iwijethi ye-Elfsight mahhala.
Instagram Feed Widget - bonisa izithombe ezivela ku-Instagram ngazo zonke izindlela ezitholakalayo - ama-hashtag, ama-URL, noma amagama abasebenzisi, nanoma iyiphi inhlanganisela yalokho. Kulula kakhulu ukugcwalisa okuphakelayo kwakho! Ukuze ukhethe okuqukethwe okucophelela kakhulu, ungasebenzisa izinhlobo ezimbili zezihlungi zokuphakelayo - ungafaki imithombo futhi ubonise kwezikhawulelwe kuphela.
Iwijethi Yebhodi Lomsebenzi - iwijethi yewebhusayithi ekuvumela ukuthi udalule izikhala ezivulekile futhi uthole ama-CV kumakhandidethi khona kanye kusayithi lakho ngendlela efinyeleleka kakhulu. Ngewijethi yethu entsha, uzokwazi ukudalula inkampani yakho, ushicilele ulwazi mayelana nokuvuleka kwemisebenzi futhi uthole ukuqhubeka. Iwijethi ikuvumela ukuthi udale ikhadi lomsebenzi elinomfanekiso onembile kanye nenkinobho ethi Faka. Ukusebenzisa i-Elfsight Job Board ikuvumela ukuthi wenze lula inqubo yokuqasha futhi uthole izimpendulo zokuvuleka kwemisebenzi ngokuchofoza okukodwa.
I-logo Showcase Widget – khombisa wonke amalogo ozakwethu noma abaxhasi noma okukhulunywe ngakho kwabezindaba kuwebhusayithi yakho. Ngosizo lwewijethi, uzobonisa ukuthi unguzakwethu othembekile futhi udale isithombe esihle senkampani yakho. Iwijethi ivumela ukwengeza noma yiliphi inani lamalogo, uwabonise kusilayidi noma kugridi, futhi ushintshe usayizi wamalogo. Ungangeza amagama-ncazo nezixhumanisi kumawebhusayithi ezinkampani. Ngosizo lwemibala nezinketho zamafonti, uzokwazi ukudala ukubukeka okuyingqayizivele.
Iwijethi Ezivelelayo - Noma ngabe yiluphi uhlobo lwe-popup ongathanda ukuba nalo kusayithi lakho - ungayakha usebenzisa i-Elfsight Popup. Memezela okuthengisiwe nezaphulelo ezikhethekile, qoqa ababhalisile nempendulo, vuselela amakalishi alahliwe, bonisa izigelekeqe ezifudumele zokwamukela, yazisa mayelana nokwethulwa okuzayo... Thola noma yini oyidingayo!
Iwijethi yokuphakelayo kwe-Pinterest - bonisa iphrofayili yakho, nanoma yiziphi izikhonkwane namabhodi avela ku-Pinterest kuwebhusayithi yakho. Ngethuluzi lethu, khetha noma yimaphi amabhodi nezikhonkwane bese udala amaqoqo ezithombe zesayithi lakho. Khombisa amaphothifoliyo akho, gqugquzela amaklayenti akho ukuthi athole izinto ezintsha noma abone ngeso lengqondo okuqukethwe kwewebhusayithi yakho. Okuphakelayo okwenziwe ngezifiso kwe-Pinterest kuzokusiza ukuthi unwebe ukufinyelela kokuqukethwe kwakho, ukhuphule ukusebenzelana nabavakashi bewebhusayithi futhi ulethe abalandeli abaningi ku-Pinterest.
Ithebula lentengo Widget - Bonisa okunikezwayo kwakho ngokuningiliziwe futhi Kuzosiza abavakashi bewebhusayithi yakho ukuba babone ngeso lengqondo ngokushesha futhi baqhathanise izici ezihlukene ezinikezwa ngamapulani akho entengo. Sebenzisa ukwenza ngokwezifiso okuphezulu ukuze wenze amanani akho abukeke kahle kakhulu - yenze ihlangane nomqondo wewebhusayithi yakho, noma igqame futhi ihehe. Yenza abathengi bakho basebenze futhi wandise ukuguqulwa!
Iwijethi Yemenyu Yokudlela - iwijethi esebenziseka kalula yokubonisa imenyu yakho yokudlela noma yekhefi khona kanye kuwebhusayithi yakho. Kuyindlela enhle yokwazisa izivakashi zakho mayelana nezipesheli zakho, mele umbhalo oyingqayizivele futhi uzifanekisele ngezithombe zokudla ezikhangayo. Ingasebenza njengethuluzi elilula lokufeza ngisho nomsebenzi oyinselele: ungakwazi ukwethula noma iyiphi inombolo yamamenyu ngenani elikhulu lezinto. Noma vele wethule uhlu olufushane lwezipesheli ozihlinzekayo. Zizwe ukhululekile ukukhetha isikimu esikhanyayo, esimnyama noma wenze ngendlela oyifisayo yonke into oyithandayo, upende kabusha yonke imibala yokuphimisela. Ithuba elikhulu lewijethi ukuthi uhlale unolwazi lwakamuva: ungashintsha amanani, uhlu lwezinto, wengeze izitsha ezintsha noma ngisho namamenyu ngokuchofoza okukodwa! Awasekho amafayela e-PDF namamenyu okufanele uwabhale kabusha ekuqaleni. Vele uqale ukudala imenyu yakho emangalisayo manje futhi ubuke inombolo yakho ehlala ikhula yokubhukha kanye nezivakashi.
Social Feed Widget - Dala Okuphakelayo Okumangalisayo Komphakathi kusuka ezinhlanganisela ezingenamkhawulo zemithombo eminingi: I-Instagram, i-Facebook, i-YouTube, i-TikTok, i-Twitter, i-Pinterest, i-Tumblr, i-RSS (iyeza maduze - i-LinkedIn nokuningi). Thatha okungcono kakhulu kokubukwayo ngezithombe ze-Instagram namavidiyo we-YouTube. Noma ungakha isifunzo sezindaba khona kanye kokuthunyelwe kwakho kwe-Facebook ne-Twitter. Jabulela ukulungiswa kwemithombo evumelana nezimo ukuze ubonise izinhlobo ezithile zokuqukethwe, inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi ngayinye esekelayo. Sebenzisa ububanzi bezihlungi ezinembile ukuze wenze okuphakelayo kwakho kube ngendlela oyifisayo noma usebenzise imodi yokuhlola mathupha.
Testimonial Slider Widget - Ukubonisa impendulo yekhasimende langempela ngesipiliyoni esihle kukhuthaza izivakashi ukuthi nazo zibe nolwazi olufanayo futhi kunikeza imikhiqizo noma izinsiza zakho ubufakazi bomphakathi. Yenza ubufakazi bekhasimende lakho kube ingxabano ewinile ngokubonisa lapho isinqumo sokuthenga senziwe khona futhi ubone ukuthi bakwandisa kanjani ukuthengisa kwakho.
Joyina abanye abasebenzisi abangaphezu kwesigidi esisodwa usebenzisa i-Elfsight Apps futhi udale iwijethi yakho yokuqala manje:
Dala Iwijethi Yakho Yokuqala ye-Elfsight
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-Elfsight futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami kuso sonke lesi sihloko.
Tags: iwijethi yokuqinisekisa ubudalaiwijethi yekhalendaingxoxo iwijethiiwijethi yesibali sikhathi sokubalaiwijethi yokubala wehleukubona kancaneiwijethi yekhalenda lomcimbiiwijethi yomcimbiiwijethi ye-facebookiwijethi yefomuiwijethi yokubuyekezwa kwe-googleIwijethi ye-Instagramiwijethi yokuvula umsebenziiwijethi yomsebenzilogo showcase widgetiwijethi yelogoiwijethi yokuphakelayo kwe-pinterestiwijethi ye-pinterestiwijethi ye-popupitafula lamanani entengoIwijethi yethebula lentengoImenyu yokudlelaiwijethi yemenyu yokudlelabuyekeza iwijethiiwijethi ye-rssokuphakelayo komphakathiiwijethi yobufakaziiwijethi yetiktokIwijethi ye-Tumblriwijethi ye-twitteramawijethiiwijethi ye-youtube